I-Aurora Borealis: izindawo ezihamba phambili emhlabeni ukuzibona | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izibani ZaseNyakatho yinto ehlaba umxhwele, impela enhle kunazo zonke umuntu angazibona futhi azithokozele. Imibala ekhangayo ekhanya esibhakabhakeni sasebusuku ingasebenza njengomthombo wokukhuthaza kubabhali nakubadwebi.
Uma ungafuni nokukugeja, thola ukuthi ziyini izindawo ezihamba phambili emhlabeni ukubona amaLights aseNyakatho.
1 Akhiqizwa kanjani amalambu aseNyakatho?
2 Okushiwo »i-aurora borealis»
3 Izinyanga ezihamba phambili zokubona Izibani ZaseNyakatho
4 Izindawo zokubona amalambu asenyakatho
Akhiqizwa kanjani amalambu aseNyakatho?
Ngaphambi kokwazi ukuthi uzoyombona kuphi, Iyiphi indlela engcono yokwazi ukuthi zikhiqizwa kanjani ngaphambili? Ngale ndlela, singayibona ngamehlo angcono kakhulu. Ngakho ake siqale.
Njengoba sazi, ilanga liqhubeka likhipha imisebe yelanga evela kuzo zonke izinhlangothi, kanti eminye yayo ifinyelela iplanethi enguMhlaba. Lapho le misebe ihlangana nezigxobo, zombili enyakatho naseningizimu, kuzibuthe zomhlaba, a ukukhanya okusakazekile kepha kugqame kakhulu ku-ionosphere.
Ukucacisa kabanzi, futhi njalo ngokusho kombono wokuthi kuze kube manje okwamukelwa kakhulu, ama-aurora abangelwa yi-a imisebe yezinhlayiyana evela enkosini yenkanyezi. Kokubili ama-electron kanye nama-proton avela kuwo ahlanekezelwe amandla kazibuthe woMhlaba. Uma izinhlayiya zihamba ngendlela efanele, amandla kazibuthe azoba nesibopho sokuzigxilisa kuzo zonke izigxobo zikazibuthe, ngaleyo ndlela zingene ekushayisaneni nezakhi zomoya, ekugcineni, zizokhipha ukukhanya.
Okushiwo »i-aurora borealis»
Uma lo mbukiso ngokwawo uyamangalisa, incazelo yegama layo ayikude kakhulu nakho. Futhi kuvela ukuthi i- "Aurora" igama likankulunkulukazi wamaRoma wokuntwela kokusa, futhi elithi "boreal" -boreas- yigama lemvelaphi yamaGrikhi elisho ukuthi inyakatho. Ngakho-ke, sinakho lokho »I-Aurora Borealis» isho i- INyakatho Dawn (noma Izibani ZaseNyakatho). Kuhle kwayo akunjalo?
Izinyanga ezihamba phambili zokubona Izibani ZaseNyakatho
Yize lesi simo singenzeka unyaka wonke, izinyanga ezinhle kakhulu Januwari nangoFebhuwari, okuyilapho amazinga okushisa ephansi kakhulu. Vele, kufanele ufudumale kakhulu ukukujabulela.
Noma kunjalo, kusuka ngo-Okthoba kuya kuMashi zenzeka kaningi, ngakho-ke uma ungeke ukwazi ukuhamba lezo zinyanga ezimbili, ungaya noma yiziphi kulezi ezinye ezine.
Izindawo zokubona amalambu asenyakatho
Manje njengoba sesazi ukuthi zikhiqizwa kanjani nokuthi yiziphi izinyanga ezinhle kakhulu, ake sibone, manje, ukuthi kufanele siye kuphi uma sifuna ukujabulela ubusuku obumibalabala kakhulu empilweni yethu.
E-Alaska, izibani ezisenyakatho zingabonakala ezintabeni phakathi nezinyanga zikaNovemba noJanuwari, lapho ziphakathi nobusika beqhwa. Uma kungokokuqala uya, kufanele ukwazi lokhofuthi benza izinkambo zasebusika abahamba befuna lezi zimanga.
Phakathi nezinyanga zasebusika, isibhakabhaka saseCanada sigcwele amalambu athi kuzokwenza ungabaze uma uphupha noma uvukile. Ekuqaleni uzobona konke kumnyama, kepha kungekudala kuzovela imidwebo namalambu okudansa azobonakala ezifundweni zamanzi ezisendaweni.
Uma ngaphezu kokuba ngumthandi wezinto ezikhanyayo uthanda izithombe, iya eGreenland ezinyangeni zasebusika futhi jabulela isigaba esiphakeme nomthwebuli wezithombe okhokhelwayo lokho kuzokufundisa ukuthola izithombe ezinhle kakhulu zobusuku.
Amalambu aseNyakatho avela e-Iceland phakathi kokuphela kuka-Agasti naphakathi kuka-Ephreli, okuyilapho amazinga okushisa ephansi nobusuku bumnyama kakhulu. Qiniseka ukuthi ikhamera yakho izobe isilungile ngo-22 ebusuku, ngoba kulapho kungenzeka ukuthi kwenzeke khona.
INorway ibingabibikho. Ngaphandle kokungabaza, indawo engcono kakhulu yi-Arctic Circle, ngakho-ke ukuyibona, lapho usiya enyakatho, kulapho ungajabulela khona iMibani yaseNyakatho. Endabeni yeNorway, kufanele uhambe phakathi kukaSepthemba 21 kuya kuMashi 21, okuzoba lapho ungaya futhi sledding noma snowmobiling.
Kule ngxenye yomhlaba kuthiwa amalambu asenyakatho awaveli noma abe ngaphansi Ubusuku obungu-200 ngonyaka, izinyanga ezihamba phambili ziphakathi kukaSepthemba kuya kuMashi.
Ngendlela, lalelisisa ngoba ochwepheshe baxwayisa ngokuthi bangahlala amahora amaningi ... noma imizuzwana.
ESiberia ukubona umbukiso onjengalo, kuzobanda kakhulu, kubi kakhulu Amazinga okushisa ebusika angawela kalula ngaphansi kuka -30ºC. Kepha kufanele ukugqoka izingqimba eziningana zemfudumalo ukuyibona.
Ukuze senze ubusuku bungabalibaleki ngempela, asikwazi ukukhohlwa okulandelayo:
Gqoka izingubo ezifudumele (kufaka phakathi amagilavu, isikhafu nesigqoko)
Lungisa ikhamera izithombe kanye / noma ividiyo
Futhi-ke funa i- indawo ngaphandle kokungcola okuncane
Yize ungakwazi ukuhamba wedwa ngaphandle kwenkinga, ngikweluleka ukuthi uhambe nomuntu omthandayo. Ngale ndlela, isipiliyoni siyoba nomvuzo omkhulu nakakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izindawo ezihamba phambili emhlabeni ukubona amaLights aseNyakatho
Amandla amangalisayo ka-El Niño '' Godzilla ''